Android ကိုလွယ်လွယ်ကူကူ Root လုပ်နိုင်တဲ့ tools တွေစုဆောင်းခြင်း Androidsis
ငါကွဲပြားခြားနားသောမှတဆင့်အများအပြားတောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံရရှိပါပြီ လူမှုရေးကွန်ရက်များ Androidsis ၏, ငါရဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတူတူ post တစ်ခုအတူတူထားနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ရှုရန် Android ကို root လုပ်ပါ နှင့်သွားကြဖို့ကြိုးစားအတွက်စိတ်ပျက်အားငယ်မထားပါနဲ့ ကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများအကြားသွားလာကျွန်ုပ်တို့၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိရိယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်သောကိရိယာကိုမရောက်မှီအထိ။
ဒါကြောင့်ငါအဓိကရေးသားပြုစုရာကဒီ post ကိုဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ Androids ကို root လုပ်ရမယ် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပါ။ Application တစ်ခုကို install လုပ်ရုံဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုမလိုအပ်ဘဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုအပ်သည်။
1 ၁။ Android ကို PC မလိုဘဲ root လုပ်နည်း
2 ၂။ Android အတွက် PC အတွက်တိကျသော tools များဖြင့် Root လုပ်နည်း
2.1 Windows အတွက် VRoot
၁။ Android ကို PC မလိုဘဲ root လုပ်နည်း
ရရ Android ကို root လုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိရန်မလိုပါက၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ပြင်ပ application များတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ Google Play စတိုး ဒါကြောင့်သင်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုချက်ကို enable လုပ်ရပါလိမ့်မယ် မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများ၏ settings menu မှ။
ရရှိရန်လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်စနစ်ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ခြင်း Android ပေါ်မှာ root လုပ်ပါ အထက်ဖော်ပြပါ application များနှင့် tools များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့၏ downloads များလင့်များကိုလေ့လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
Framaroot အခမဲ့ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး XDA Developers မှ developer များအဖွဲ့မှဖန်တီးထားပြီး Androids ကို Root လုပ်ရန်အဓိကအကြံပြုထားသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏သဟဇာတဖြစ်သောဆိပ်ကမ်းများစာရင်းသည်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာပြီးအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုး၏ Android terminal မော်ဒယ်များကိုပိုမိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဒါကဖြစ်ပါသည် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေ tool ကို Android အတွက်၊ တရုတ်မူရင်းနှင့်၎င်းသည်အပလီကေးရှင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့စက်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်နိူင်သည် မာစတာ Root.
အောက်ပါတို့ဖြင့် ငါပို့စ်တွင်ညွှန်ပြသောညွှန်ကြားချက် ပြီးတော့ဆံပင်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်တောင်မလုပ်မိလျှင်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လျှင် Androids ကို Root လုပ်နိုင်သည်။
၂။ Android အတွက် PC အတွက်တိကျသော tools များဖြင့် Root လုပ်နည်း
ဒီဒုတိယပိုင်းမှာမင်းကိုအကြံပေးပါမယ် နှစ်ခုယေဘုယျ tools တွေကို အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကို Android terminal တစ်ခုလုံးနီးပါးကို root လုပ်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ ငါကတိကျတဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့လမ်းမရှိသော terminal model များအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကတည်းကငါနှစ်ခုယေဘုယျ tools တွေအကြောင်းပြောကြသည် အမြစ်။ သငျသညျကဲ့သို့သောလူကြိုက်များဆိပ်ကမ်းရှိပါက ကို Nexus 5, Samsung ရဲ့ Galaxy S4 o က galaxy S3, LG က G2၊ ကျွန်ုပ်တို့မှထို terminal များကို root လုပ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသင်ရှာရမည် ပြီးပြည့်စုံသောခြေလှမ်း -by-step သင်ခန်းစာများ သူတို့ကိုမင်းဒီမှာရှာတွေ့နိုင်တယ် Androidsis ပါ.
Windows အတွက် VRoot
ဤ post သည် LG G Pro Lite ကို Root လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သော်လည်း၊ VRoot ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Android အားလုံးနီးပါးကို root လုပ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်ဖြစ်သည်။
ပူးတွဲပါသင်ခန်းစာရှိအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်မည်သည့်ပြkindနာမျိုးမှမဖြစ်သင့်ပါ Android ကို root လုပ်ပါ မူရင်းမူရင်းအစီအစဉ်သည်တရုတ်ဘာသာသာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောပထမဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Windows ကို Android terminal တော်တော်များများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ကြိုက်တယ် VRoot ပါ။ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ပူးတွဲပါသင်ခန်းစာပါအဆင့်များအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ Android Terminal များကိုမျက်စိတမှိတ်အတွင်း Root လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ဤအရာများကိုသင်တို့အားမပြီးမြောက်စေရန် root လုပ်ဖို့နည်းလမ်း သင်၏ Androids သည်မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အသုံးပြုသောဆိပ်ကမ်းများကို format လုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ Android စက်မော်ဒယ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါက အောက်ပါကြိုးစားရန်တှနျ့ဆုတျပါဘူး သငျသညျကြိုးပမ်းမှုအတွက်ပြproblemနာမဆိုကြင်နာရှိသည်ဖို့မလိုပါကတည်းက။ အများဆုံးသောစနစ်ကသင်၏ Android terminal (သို့) operating system ဗားရှင်းနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းပြောပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - [APK] Google Play စတိုးမှရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်မူကိုကူးယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android Root ပါ » Android ကို Root လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၂ မျိုးကိုသင်မမေ့နိုင်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျား Androsis အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်နေတာလဲ။ Xperia J st26a ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲ။ ငါကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေပြီးမည်သည့်အရာကမျှရလဒ်ကောင်းများမရခဲ့ပါ။ သင်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Juan Ivan ကိုပြန်ပြောပါ
ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုရှိပါကမိုဘိုင်းသတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သည် ??? သူတို့ကဒါကိုမဖော်ပြထားဘူး၊
ဟိုဆေးဒံယလေသ Gutierrez V ကို ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်တစ်ခုကပိုကောင်းတာလဲ ငါ့အမှု၌ငါအသက်ရှင်သော Walkman wt19a android ICS compilation ရှိသည် .587 ... မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါ flashtool ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ။
José Daniel Gutierrez V ကိုပြန်ပြောပါ
LG Optimus L5 ii (ဖုန်းဘုတ်ပေါ်မှအမှားတစ်ခုကြောင့် usb debugging မှတဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုမဆက်သွယ်ပါက) Root master သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလုံးဝဒီအမြစ်ပြissueနာမှနှုတ်ထွက်ခဲ့သည် =)
Roja Directa ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Android မှ Sevilla - Real Madrid ကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း